Maxaa lagu arki Navaluenga: dalxiiska miyiga iyo dhaxalka dhexe | Wararka Safarka
Maxaa lagu arki karaa Navaluenga
Waxa lagu arko Navaluenga waa su'aal aan laga jawaabin inta badan mareegaha safarka. Sababtoo ah magaaladan yar ee gobolka Avila waxay ka baxsan tahay waddooyinka dalxiiska ee hawl-wadeennada waaweyn.
Si kastaba ha ahaatee, Navaluenga Waa yaab in aad ogaato. Magaaladan yar, oo boqol kiiloomitir u jirta Madrid, waxay leedahay dhaxal taallo oo xiiso leh. Laakiin, dhammaan ka sarreeya, deegaan dabiici ah oo mudnaanta leh iyo gastronomy delicious. Haddi dantaadu kacday waxa lagu arko Navaluenga, waxan oo dhan waanu kaala hadli doonaa.
1 Maxaa la sameeyaa iyo waxa lagu arko Navaluenga?
1.2 Dhaxal diineed qani ah
1.3 Buundada Romanesque
1.4 Necropolis dhexe dhexe ama Las Cabezuelas: waxqabadyo kale oo lagu sameeyo Navaluenga
1.5 Nawaaxiga Navaluenga
1.6 Gastronomy ee Navaluenga
1.7 Sida loo tago Navaluenga?
Maxaa la sameeyaa iyo waxa lagu arko Navaluenga?
Iyada oo ay ku nool yihiin laba kun oo qof oo ay maydheen Webiga Alberche, magaaladan Avila waxaa loo arkaa albaabka laga galo Sierra de Gredos. Dhab ahaantii, waxay ku taallaa joog dhan 1700 mitir waxaana ka bilaabma dhowr waddo oo tumasho iyo buuro ah. Sidaa darteed, waxaan bilaabeynaa inaan kaala hadalno waxa lagu arki karo Navaluenga jawigeeda dabiiciga ah ee cajiibka ah.
Kaydka Burguillo iyo qalcaddii
Sida aan sheegnay, wadooyin kala duwan oo buuraley ah ayaa ka bilaabma Navaluenga kuwaas oo ku geynaya meelo aan laga adkaan karin. Waxaa ka mid ahaa Peñalar waadi, oo leh in ka badan kun mitir oo joog ah. Waa aag geed laurel ah iyo gorgorta madow ee arka. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay biyaha ee Kaydka Burguillo. By habka, waxaan kuu sheegi doonaa in qoyan this waxaa jira jasiirad leh qalcaddii qurux badan oo xasuusin kuwa sheeko-dhaqameed. Waad ku sii jiri kartaa oo waxaad dareemi kartaa sida dabeecad dhexe.
Wax yar oo cajiib ah maaha Dooxooyinka Lanchamala iyo Barranco Cambronal. Midka ugu horreeya, oo ay ku hareeraysan yihiin dhagaxyo, ayaa leh meesha ugu sarreysa ee La Rubiera, taas oo, dhererkeedu yahay laba kun oo mitir, waa meesha ugu sarreysa ee aagga.
Yaabka kale ee muuqaalka Navaluenga waa Kaydka dabiiciga ah ee Valle de Iruelas, kaas oo leh qiime deegaan oo weyn. Sidoo kale waa meel lagu daawado gorgorrada madow, laakiin sidoo kale noocyada kale sida gorgorka boqortooyooyinka ama gorgorka. Waxaas oo dhan iyada oo aan la iloobin kaymaha chestnut ama inta kale ee xayawaankeeda. Kuwaas waxaa ka mid ah, deerada, ugaadha duurjoogta ah ama hiddo-wadaha.
Ugu dambeyntii, webiga Alberche wuxuu abuuraa barkado dabiici ah oo dhowr ah oo aad ku qaadan karto qubeys cajiib ah. Iyo in Dehesa de Trampalones Waxaad ka heli doontaa kaymaha geedaha iyo udgoonka cajiib ah. Waxaad ku gaari kartaa lug iyo baaskiil labadaba, maadaama ay leedahay waddo gaar ah.
Dhanka kale, waxaa laga yaabaa inaad la yaabto inaad ogaato in magaalo yar oo sida Navaluenga ay leedahay koorsada golf-ka oo leh soddon hektar oo dhir ah, harooyin iyo wadar ahaan soddon godad.
Dhaxal diineed qani ah
Waddo ku taal Navaluenga
Wax walba maahan dabeecadda Navaluenga. Waxa kale oo ay leedahay dhaxal diimeed oo xiiso leh. Jibbaankiisa ugu badan waa Kaniisadda Parish ee Our Lady of Villares, oo la dhisay intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad. Wajigeeda, waxaa jira afar geesood oo carpal ah oo ay taageerayaan lix tiir, halka gudaha aad u baahan tahay inaad eegto font baabtiiska Romanesque.
Sidoo kale, ag ee macbudka this, waxaad arki kartaa Cross of Cerrillo de San Marcos, oo ay ku qoran tahay far Gothic. Nashqada diinta ee magaaladu waxay sidoo kale ka kooban tahay hiddaha Nuestra Señora de la Merced, oo laga soo bilaabo qarnigii toddoba iyo tobnaad, San Isidro, oo laga galo qaansada fardaha, iyo kan Virgen del Espino, 1800 mitir. ee joogga iyo halka lagu qabto xajka sanad walba.
Buundada Romanesque ee Navaluenga
Mid kale oo ka mid ah calaamadaha Navaluenga waa buundada Romanesque, taas oo si fiican loo ilaaliyo. Waxa la dhisay qarnigii XNUMX-aad si ay u fududayso in lo'du u gudubto buuraha. Iyagoo laba qaybood oo waaweyn. Sida aad la socotaan waa magaca loo bixiyay qaybo ka mid ah saldhigga buundooyinka ee u samaysan sida doonyaha lagu gooyo biyaha.
Necropolis dhexe dhexe ama Las Cabezuelas: waxqabadyo kale oo lagu sameeyo Navaluenga
Xarig sib ah
Aad ugu dhow Navaluenga waa necropolis dhexe dhexe sare ee Fuenteavila. Shukaansiga u dhexeeya qarniyadii XNUMX-aad iyo XNUMX-aad, waxa ay leedahay ugu yaraan shan iyo toban xabaal oo lagu qoday doomo granite ah. Kaydadka noocaan ah ayaa aad ugu badan buuraha Avila waxayna ahaayeen meelo lagu aaso tuulooyin yar yar oo dhaqaalahoodu ku salaysan yahay ka faa’iidaysiga xoolaha.
Dhanka kale, marka laga reebo dhaxalka taariikhiga ah iyo deegaanka ee magaalada Avila, waxaa jira beerta tacaburrada ee Cabezuelas. Laakiin wali waad ku raaxaysan kartaa. Waxay leedahay xarriiqo sib ah oo kala duwan iyo waxqabadyo kale oo madadaalo oo loogu talagalay carruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Oo waxaas oo dhan waxay ku dhex jiraan dabeecad cajiib ah.
Nawaaxiga tuuladan cajiibka ah ee Ávila sidoo kale waxay leedahay meelo xiiso leh oo aan kugula talineyno inaad booqato. Waa kiiska Burgohondo abbey. Dadkani waxay ahayd caasimadda golaha uu Navaluenga ka tirsanaa wakhtiyadii dhexe.
Dhamaadkii qarnigii XNUMX-aad ayaa aagga loo wareejiyay Amarka Isbitaalada Saint John ee Qudus si ay uga difaacaan weerarada Muslimiinta. Taas awgeed, xubnaheeda waxay aasaaseen convent hoos baaqa St. Augustine, inkastoo markii dambe Dominicans ay daryeeleen.
Waqtigeeda, waxay ahayd keniisad aad muhiim u ah. Xaqiiqda ah in uu mudnaanta ka helay boqorrada sida Alfonso X ee Wise, Boqortooyada Katooliga ama Felipe II iyo wadaadada sida Alexander VI ama Leo X ayaa ina siinaya fikradda tan.
Hadda, kaniisadeeda oo keliya ayaa ka hartay abbey. Waxay leedahay qorshe dabaqa Romanesque, in kasta oo ay leedahay saqafka weyn ee Mudejar. Sidoo kale, meesha allabariga waxaad ku arki kartaa hadhaagii sawirada darbiga ee qarnigii XNUMXaad.
Magaalo kale oo soo jiidasho leh oo u dhow Navaluenga waa tuulada Casillas, kaas oo fidsan inta u dhaxaysa kaymaha chestnut. Haddii aad booqato dayrta, oo leh midabada xilliga, waxaad arki doontaa muuqaal cajiib ah.
Waxa ka sii muhiimsan waa deegaanka Barraco, oo kaliya labaatan daqiiqo oo baabuur ka timid Navaluenga. Waxaa hoy u ah meesha ugu sarreysa ee Cebrera, waxay ku siinaysaa taallooyin badan iyo meelo xiiso leh. Adiga Nuclei dhexe ee Avellaneda, Navalcarros ama Navalmulo, maanta lama deggana.
Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato El Barraco kaniisadda Our Lady of Assumption, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad, buundada Roomaanka, hermitage ee La Piedad, dhismaha Hall Town (sidoo kale laga soo bilaabo qarnigii XNUMXaad) iyo munaaradda Gaznata, oo ku taariikhaysan qarnigii XNUMXaad.
Sidoo kale, ka mid ah hareeraha si aad u aragto Navaluenga, waa mid aad u qurux badan Villanueva ee Avila. Magaaladan yar waxay u taagan tahay guryaha dhaqanka ee xaafadaha sida Las Tórdigas iyo Roblellano, Kaas oo ka kooban hab-dhaqameed xiiso leh. Ugu dambayntii, waan kaala hadli doonaa Navarrevisca, halkaas oo aad booqan karto kaniisadda San Sebastián, hermitages ee Humilladero iyo San Antonio, iyo sidoo kale buundooyinka kala duwan.
Laakiin, inta u dhaxaysa waxa la sameeyo iyo waxa lagu arko Navaluenga, waa inaan sidoo kale kuu sheegnaa waxa ku saabsan gastronomy-keeda. Kama bixi kartid magaaladan quruxda badan ee Avila adiga oo aan isku dayin suxuunta caadiga ah ee macaan.
Gastronomy ee Navaluenga
Hilibka T-lafta ee Ávila
Magaaladu waxay ahayd aag adhijirro qarniyaal ah. Sababtan awgeed, cuntadeedu waa mid xooggan oo caloric ah, laakiin sidoo kale waa mid aad u fiican. Kuwa ku jira cuntada ma heli doonaan suxuun badan si ay u ilaaliyaan. Waa gastronomy xoog leh, laakiin ku habboon inaad dib u buuxiso baytariyadaada ka dib markaad booqato Sierra de Gredos.
Suxuunta aad dhadhamin karto waxaa ka mid ah maraqa toonta, taasi waxay kaa dhigi doontaa diiran ama qaar baradho la tumay oo leh torreznos kuwaas oo macaan leh. Ma yara xoog badan yihiin digirta deegaanka oo leh chorizo.
Laakiin, adigoo ah magaalo ku taal Avila, ma seegi kartid hilibka doofaarka ee Avila ama ilmaha qaabka Navaluenga ama fuud. Waxaad sidoo kale dooran kartaa doofaarka nuugaya ama doofaarka nuugaya, digaaga in pepitoria ama gacmaha doofaarka iyo bakaylaha ugaadhsiga.
Sidoo kale, waa mid ka mid ah aagga hornazo, kaas oo ah nooc ka mid ah pie ka buuxa chorizo ​​​​, hilib doofaar iyo ukun. Iyo kubbadda chicarrones, kaas oo lagu sameeyay dufanka doofaarka, laakiin sidoo kale waxaa ku jira sonkor iyo anise.
Tani waxay noo horseedaysaa inaan kuu sheegno macmacaanka caadiga ah ee Navaluenga. Xagga iyaga, waxaan kugula talineynaa inaad tijaabiso fritters, Yolks Santa Teresa (sida caadiga ah dhammaan gobolka Ávila) ama tocinillo de cielo. Ugu dambeyntii, waxay caan ku yihiin magaalada Avila fersken, oo aad dhadhamin karto, tusaale ahaan, sharoobada.
Sida loo tago Navaluenga?
Waddada marka ay marto El Barraco
Degaanku waa koonfurta Avila iyo waqooyi galbeed ee Madrid. Waxaad leedahay adeeg basaska labada magaalo. Marka ugu horeysa, gaadiidku wuxuu qaataa ilaa konton daqiiqo inuu yimaado, halka, marka la eego Madrid, safarku wuxuu qaadanayaa ku dhawaad ​​​​laba saacadood.
Dhanka kale, haddii aad ku safarto baabuurkaaga, muddada aad bay u soo gaabinaysaa. Laga soo bilaabo Ávila, waa inaad soo martaa jidka weyn ee 403, kaas oo sidoo kale mara Barraco. Si sax ah magaaladan, waa inaad ka baxdaa jihada San Juan de la Nava ka dibna u leexo koonfurta si aad u gaarto Navaluenga.
Dhanka kale, haddii aad u tagto magaalada baabuurkaaga Madrid, waa inaad u socotaa jihada Pozuelo y San Martin de Valdeiglesias si markaas loo jihaado Gariirka. Kahor intaadan gaarin El Barraco, waa inaad bidix u leexataa Hoteellada ku yaal Burguillo iyo, ka dib markii la maro Geeska, waxaad iman doontaa Navaluenga.
Gabagabadii, waanu ku tusnay waxa lagu arko Navaluenga. Waxaan sidoo kale kuu sheegnay jawiga dabiiciga ah ee quruxda badan ee ku hareeraysan magaalada Avila iyo sida aad u buuxin karto baytariyadaada adigoo ku raaxaysanaya gastronomy-ga quruxda badan ee aagga. Xitaa waxaad leedahay koorsada Golf-ka, haddii aad jeceshahay isboortiga. Hadda waa inaad go'aansatid inaad barato magaaladan quruxda badan ee Sierra de Gredos.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways » Maxaa lagu arki karaa Navaluenga
Magaalooyinka ugu quruxda badan ee u dhow Berlin
Waxa lagu arko Okinawa